प्रदेश ५ का सरकारी अस्पतालको दुरावस्था , सुधारका लागी प्रयन्त जारी :मन्त्री बराल – Swasthya Samachar
August 14, 2019 Editor स्वास्थ्यसमाचार
स्वास्थ्यसमाचार/मानिसको जीवन रक्षा गर्ने थलो हो अस्पताल। मानिस आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा समेत पुनः जीवन पाउने आशाले अस्पतालमा जाने गर्दछन्। ती अस्पताल नै अस्पतालजस्ता नभएपछि बिरामीको हतास मानसिकता कस्तो होला ?
प्रदेश ५ अन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पतालहरूको अवस्था अस्तव्यस्त रहेको पाइएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङमा अस्पतालको अवस्था दयनीय छ। अस्पतालका सबै फाँटहरू अस्तब्यस्त नै देखिन्छन्। इमर्जेन्सी बिरामी ल्याउनेहरूको पीडा, ‘यहाँ त यस्तो जञ्जाल छ कि अस्पतालको काइदा कानून बुझ्दा बुझ्दै बिरामीको ज्यान जान्छ।
पहिलो पटक बिरामीको अवस्था बताउन र अघिको कसो गर्ने भन्ने निर्णय खोज्न जाने स्थान फाँट हो। त्यहाँबाटै बिरामीका आफन्त पीडा भोग्न शुरू गर्दछन्। फाँटका कर्मचारी न बोल्छन् न कुनै प्रतिक्रिया दिन्छन्। हतासमा रहेका बिरामीका आफन्त झन पीडित हुनु कुनै नयाँ कुरा हुँदैन्। ‘कर्मचारीहरूमा कुनै जिम्मेवारी नै छैन, बिरामी लिएर अर्घाखाँचीबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल आएका मनोज आलेले पीडा सुनाउँदै भन्छन ‘सरसफाइको त के कुरा, बिरामी कुरुवासमेत बिरामी होला भन्ने डर।’
के सम्म भएको छ अस्पतालहरूमा ?
अस्पतालहरूका फार्मेसीमा बिरामीको ज्यानमाथि नै खेलवाड हुने गरी म्याद सकिएका र म्याद रहेका औषधिहरू एकै स्थानमा राखेको भेटिएको छ। यसरी बिरामीको ज्यानमाथि नै खेलवाड हुने कुरा मानवको नैसर्गिक अधिकारमाथिको खेलवाड भएको अधिकारवादीहरूको बुझाइ छ।
‘जीवनको अन्तिम अवस्थामा आशाको केन्द्र भनेकै अस्पतालहरू हुन्,’ मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल भन्छन्न, ‘मानव जीवनमाथि खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन।’अस्पतालहरूमा एउटै बेडमा तीन जना बिरामीसम्म राख्ने गरिएको छ। यसले बिरामीलाई इन्फेक्सनको जोखिम उच्च रहने गरेको डाक्टरहरू बताउँछन्। बिरामीको चापका कारण र बेडको अभावले एकभन्दा बढी बिरामी राख्न बाध्य हुने गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल बताउँछन्।
काम लाग्ने समानहरू पनि मर्मतसम्भार नगरी जीर्ण हुने गरी राखिएको छ। औषधि स्टक भए र पनि बिरामीलाई उपलब्ध नगराएको बिरामीहरूको गुनासो छ।
सम्झौताको म्याद सकिएर पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निजी फार्मेसी सञ्चालन भइरहेको सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घ रायण पाण्डेयले अनुगमनका क्रममा देखिएको बताए। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा हाल ७३ वटा सटर र सिँढीमुनि चार कोठा रहेका छन्।
प्रदेश ५ का प्रादेशिक अस्पतालहरू मात्र होइन, अन्य जिल्लाहरूमा रहेका सरकारी अस्पतालहरूमा पनि अवस्था उस्तै छ। भीम अस्पताल भैरहवा, पाल्पा जिल्ला अस्पताल पाल्पा, जिल्ला अस्पताल गुल्मी, सन्धिखर्क अस्पताल अर्घाखाँची, कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु र पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीको पनि अवस्था दयानीय पाइएको हो। केही दिनअघि अनुगमनमा गएका सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घ रायण पाण्डेयका अनुसार ती अस्पतालहरूको अवस्थाका कारण बिरामीहरू थप मर्कमा पर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, रुकुम पूर्व, रोल्पा र प्यूठान जिल्लामा पनि अवस्था उस्तै रहेको पाइएको छ। कतै दरबन्दीअनुसार डाक्टरहरूको काम त कतै कर्मचारीको मनपरी देखिएको अनुगमनमा गएका समिति सदस्य अष्टभुजा पाठकले बताए।
सुधारका लागी प्रयन्त जारी समाजीक बिकास मन्त्री बराल
प्रदेशिक अस्पतालहरूमा देखिएका समस्या समाधनका लागि प्रयत्न शुरू भएको प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए। ‘अस्पतालहरूमा समस्या नै नभएको होइन, देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि नयाँ प्रयत्न शुरू भएको छ,’ उनले भने।
अस्पतालका फार्मेसीहरूमा म्याद गुज्रिएका औषधि राखेको प्रमाणसहित आएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए। पुराना भौतिक संरचनाका कारण कुनैकुनै अस्पतालहरूमा एकभन्दा बढी बिरामी राख्ने गरेको मन्त्री बरालले स्वीकार गरे।